Dhagabadan: Dhagax la soo tuuray 01/10/2012
Guusha xoraynta Kismaayo waxay noqotay mid dadka kala saarta, waxaa ku farxay Soomaali kasta oo xalaal ah islamarkaana jecel wadajirka umadda, waxaa ka naxay qof kasta oo arinta ka eega dhinaca qaldan sida armay reer hebel wax noqdaan iwm.
Dahagabadan ayaa laba goor qaldamay, dorraad wuxuu yiri war ha galina magaalada, shalayna wuxuu yiri Raaskanbooni ha i maqashiinin. Waa yaab, Dhagabadanoow xoraynta Kismaayo iyo Jubbooyinka waxaa naftoodii qaaliga ahayd ku waayay boqollaal dagaalyahan, boqollaa ayaa ku dhaawacmay. Waxaa ku baxay waqti, juhdi iyo dhaqaale aad u badan. Bal waa su�aale dhagabadan muxuu ku darsaday shalay halgankaas qaatay mudada saddaxda sano ah? Toloow Dhagabadan Raaskanbooni ma yaqaannaa? Shaki kuma jiro inuu yaqaanno laakiin wax kalaa meesha ku jira oo maxay tahay? Su�aasha jawaabteeda way guda wayn tahay, amarkuna Dahagabadan mal laha bal-e waa loo soo dhiibay.
Marka aan tixraax ku samayno xaaladaha xoraynta ee socda waxaa gacanta Alshabaab laga xoreeyay meelo badan oo istaraatiiji ah. Ma jirin magaalo ama meel kale oo faragalin lagu sameeyay illaa Kismaayo mooyee. Kismaayo dabcan in la xoreeyo waa la jecel yahay laakiin yaa la diiddan yahay? Bal aan jawaab gaaban ka bixiyo Raaskanbooni iyo cidda la diiddan yahay.
Jawaabta cida la diidan yahay waa beesha Absame, sababaha loo diidan yahay waa sababo fog-fog oo dhaafsiisan Soomaalida balse maanta ay dad badan aaminsan yahiin ama la galiyay fikir ahaan. Beelaha Absame oo ku badan gobollada Soomaalidu ka dagto Ethiopia iyo Kenya ahna beesha ugu ballaaran gobollada Jubbooyinka ayaa noqotay beel mar kasta shiishku dul saaran yahay,si gaar ahna loo ilaaliyo, marar badanna lagu soo hubeeyay beelo kale oo Soomaaliyeed ama gobolka ha dagaan ama gobollo kaleba ha ka yimaadaane. Sababta ugu wayn waxay ahayd dhaqdahqaaqa ka dagaallama Ogadenia.
Maxaa isbadalay maanta? Waxaa isbadalay tafkiirkii beesha Absame, waxaa wada hadal ku socda jawi wanaagsan bilaabay ONLF iyo Ethiopia si loo soo afjaro dagaalka mudada dheer socday. Beeshu waxay og�aansatay inay cid kasta nabad kula noolaato. Marka Soomaali badan baan ogaynba isbadalka jira oo ay kaga dhagan tahay in Ogaadeenka la qab-qabto.
Raasskanbooni: Raaskanbooni ninka diidan waa nin diidan Beesha Absame, waa geesiyadii naftooda qaaliga ah u huray xoraynta shacabkooda. Waxay mudan yahiin ammaan iyo bogaadin. Dhagabadanna waa dhagax la soo tuuray.